Haydarooliga Crawler Crane, Koronto Spider Crane, Boom Loader - Wilson
Xiamen Wilson Machinery Co., Ltd. waa qalab xirfad leh & shirkad soo saarta mishiinada oo ku takhasusay cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga mashiinnada culus.
Crawler-kayada kala duwan waxa loo nashqadeeyay in lagu fuliyo shaqooyinka kor u qaadida xataa meelaha ugu adag ee la galo.
Sanduuqa wareegtada dareeraha korantada sare leh oo leh halbeeg caalami ah, dhammaan qalabyada waxay qaataan qaab dhismeedka ilkaha helical si loo dammaanad qaado hufnaanta gudbinta sare iyo qaylada hoose.Gearrada si fiican u taagan, oo leh shaqada wareejinta KD waxay hubisaa hufnaanta hawleed sare.
HAYBAHA TELESCOPIC ee taayirrada waxay jecel yihiin forklift-ga laakiin waxa uu leeyahay kor u kaca telescopic, taas oo ka dhigaysa wiish ka badan kan forklift ah, iyada oo la kordhinayo kala duwanaanshaha hal telescopic oo hore iyo kor uga sii socon kara baabuurka.
Wiish gurguurta oo yar oo la qaadan karo ayaa khuseeya gudaha iyo xaaladaha dhulka ee adag.Xawaraha kala duwan ee bidix iyo midig, lulitaanka iyo leexashada;raadiyaha leexashada yar;ma xadidna goobta shaqada;Qalabku wuxuu u shaqayn karaa si xor ah xitaa meel aad u cidhiidhi ah oo xaddidan.
Shirkaddayadu waxay soo saartaa silsiladaha ilaalinta taayirada ee taayirada waaweyn.Silsiladan ilaalinta taayirka waxa loo isticmaalaa rararayaasha taayirrada, cagaf-cagafayaasha, LHD-yada, kuwa macdanta iyo kuwa dhagaxa tuura, xoqida iyo graders.
Noocyada iibka kulul
Marka lagu daro alaabada waxqabadka sare leh, waxay bixisaa adeeg caalami ah oo la isku halayn karo.Taas macneheedu waxa weeye waxaanu kuu ogolaanaynaa inaad si badbaado leh oo hufan u shaqeyso - xitaa xaalado aad u daran.
Kala duwanaanshaha cabbirka:10-45cm
Ka dheerow nolosha taayirrada:≥42% (Xaalad shaqo oo caadi ah)
tafatiran Hel xigasho
Dhererka (fargeeto dhulka):11250mm
Awood la qiimeeyay:278Kw
5 Ton Telescopic Booms Spider Crawler Crane oo leh...
Tilmaamid:5.00T x 2.0m
Radius Shaqo ee ugu badan:16m x 0.21t
Dhererka (la'aanteed fargeeto):4950mm
Awood la qiimeeyay:62.5/2200Kw
SILSILADDA ILAALINTA TAYARKA
Raadiyaha Telescopic Wheel, Raadiyaha Taayirrada Telescopic, Gurguurte Crane Telescopic Boom, Tele Loader, Wiish Gurguurta ee Telescopic, Telescopic Boom Gurguurte Crane,